विज्ञ भन्छन्- काठमाडौंमा विद्यालय खोल्ने बेला भएको छैन, तिहारसम्म कुरौं :: Setopati
विज्ञ भन्छन्- काठमाडौंमा विद्यालय खोल्ने बेला भएको छैन, तिहारसम्म कुरौं
विवेक राई काठमाडौं, भदौ १७
काठमाडौं उपत्यकामा विद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहँदा विज्ञहरूले भने अहिले बेला नभएको बताएका छन्।
हिजो (बुधबार) उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका सिडिओको बैठकले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने आदेश जारी गरेसँगै उपत्यकामा विद्यालय खोल्ने तयारी गरिएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आगामी सातादेखि विद्यालय खुलाउने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ।
महानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले यही साताभित्र विद्यालय सञ्चालन गर्नबारे निर्णय गरिने र सम्भवतः आउँदो साताको सोमबार वा मंगलबारदेखि विद्यालय खुल्न दिइने जानकारी दिए।
तर उपत्यकामा अहिले नै विद्यालय खुलाउने कुरा हतारो भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै भाइरोलोजिष्ट डा. लुना भट्टले भनिन्,'विद्यालयमा प्राय: १८ वर्षमुनिका बालबालिका हुन्छन्। उनीहरूले खोप लगाएका छैनन्। विद्यालय भनेको भिडभाड हुने क्षेत्र हो। त्यसमाथि अहिले फैलिरहेको भेरियन्ट पहिलाको भन्दा फरक छ। सबैलाई संक्रमण गराउने प्रकृतिको छ। त्यसैले भोलि बालबालिकालाई तलमाथि केही भयो भने अर्को समस्या हुन्छ।'
सरकारले भने १८ वर्ष उमेर समूह मुनिका बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप छिट्टै ल्याइने बताएको थियो।
गत साउन २८ गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने फाइजरको खोप खरिदको प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए। तर उक्त खोप अहिलेसम्म आइपुगेको छैन।
त्यसैले बालबालिका खोप नपाउने उमेर समूहमा पर्ने भएकाले उपत्यकामा विद्यालय खुलाउनका लागि अझै दुई चार महिना संक्रमणको अवस्था हेर्नुपर्ने डा. भट्टको तर्क छ।
कम्तीमा दसैं/तिहारसम्म संक्रमणको अवस्था हेर्ने र त्यसपछि संक्रमणको अवस्था घट्दो क्रममा रहे विस्तारै विद्यालय खोल्न सकिने उनी बताउँछिन्।
'यत्रो दुई वर्ष त बन्द भयो भने अब दुई चार महिना हेरेर संक्रमण कम भएपछि विद्यालय खोल्नुपर्थ्यो। अहिले पनि दैनिक झन्डै दुई हजार नयाँ संक्रमित देखिरहेका छन्। दैनिक २० जनाको मृत्यु भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले विद्यालय खोल्ने कुरा हतार नै भयो,' उनले भनिन्।
अर्का भाइरोलोजिष्ट डा. वासुदेव पाण्डे पनि उपत्यकामा अहिले नै विद्यालय सुरू गर्ने कुरा अपरिपक्व रहेको बताउँछन्।
अहिले संक्रमणको ठ्याक्कै अवस्था कस्तो हो भनेर थाहा नभएको भन्दै उनले यस्तो बेलामा विद्यालय खोल्ने कुरा गाह्रो हुने बताए।
'बच्चाहरूमा भाइरस डबल म्युटेसन भएर नयाँ भेरियन्ट देखिने जोखिम छ। विद्यालय खोल्दा नियम त बनाउँला तर त्यो कति पालना हुन्छ भनेर कस्ले नियमन गर्ने?,' डा. पाण्डेले भने, 'त्यसैले विद्यालय खोल्ने बेला भएको छैन। अहिले पनि संक्रमण दर १५ देखि २० प्रतिशत छ। कम्तीमा संक्रमण घटेर ५ प्रतिशत वरिपरिमा आउनुपर्‍यो नि!'
उनले पनि विद्यालय खुलाउने कुरा कम्तीमा दसैं-तिहारपछि निर्णय गर्न सकिने बताए।
अहिले तेस्रो लहरको कुरा चलिरहँदा त्यसको यकिन भएपछि मात्र विद्यालय खुलाउने/नखुलाउने निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै उनले अहिले नै खोल्ने निर्णय गर्नु अलिक अपरिपक्व हुने उनले बताए।
साथै विद्यालय खोल्नुपूर्व बालबालिकामा संक्रमण दर कस्तो छ भनेर यकिन गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
'हाम्रो मलिकुलर परीक्षण भएको देखिँदैन। देशभर परीक्षण गर्ने र नयाँ भेरियन्ट छ/छैन भनेर यकिन गर्नुपर्छ। बच्चाहरूमा संक्रमण दर कस्तो छ भनेर हेरेपछि मात्र विद्यालय खोल्ने कुरा गर्नुपर्छ,' डा. पाण्डेले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अघिल्लो सातामात्र देशभर गरिएको 'सिरोप्रेभलन्स' सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा १३ हजार नमूनाको परीक्षण गर्दा ६८ प्रतिशत मानिसमा एन्टिबडी विकास भएको कुरा उल्लेख थियो।
साथै खोप लगाएका ९० प्रतिशत मानिसमा एन्टिबडी रहेको जनाइएको छ।
उक्त रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने झन्डै ७० प्रतिशत मानिसमा एन्टिबडी देखिएको भन्दै नेपाल 'हर्ड इम्युनिटी' को अवस्थामा पुगेको डा. पाण्डे बताउँछन्।
'मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणले झन्डै ७० प्रतिशतमा एन्टिबडी भएको तथ्यांक निकाल्यो। त्यो सर्वेक्षण कस्तो हो खासमा? कुन विधि अपाइयो?,' उनले भने, 'गत वर्ष हामीले पनि त्यही सर्वेक्षण गर्दा १५ प्रतिशतमा एन्टिबडी देखिँदा मन्त्रालयले धेरै देखियो भनेर केही समय त्यो तथ्यांकलाई सार्वजनिक नै गरिएन। अहिले त झन्डै ७० प्रतिशतमा देखिएको छ। त्यो हो भने त अब बाँकी मानिसलाई खोप लगाउनै परेन। किनभने हाम्रो लक्ष्य नै ७० प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाउने भन्ने थियो। अनि खोप लगाए पनि एन्टिबडी नै विकास हुने हो तर यहाँ त झन्डै ७० प्रतिशत मानिसहरूमा खोप नलगाइ नै एन्टिबडी देखिएको छ।'
डा. पाण्डेका अनुसार महामारीमा ६० प्रतिशतमाथि मानिसमा एन्टिबडी देखिएमा त्यसलाई 'हर्ड इम्युनिटी' को अवस्था भनिन्छ। जसले हर्ड इम्युनिटीमा पुगेको समुदाय सुरक्षित रहेको बुझाउँछ। त्यसैले यदि सरकारले गरेको सर्वेक्षण सबै हिसाबले सही छ र त्यसबाट आएको तथ्यांक पनि सही रहेको अवस्थामा भने विद्यालयहरू खोल्न सकिने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १७, २०७८, १५:२९:००